Uruurinta faashashka naqshadaha naqshadaha iyo fikradaha | Tattoo
Tilmaamaha faashadu ma aha oo keliya qalab, laakiin xoogga iyo awoodda dadka iyaga wata. Oo hadda waxaan sii ballaadhinayaa aqoontaada wax yar oo ku saabsan naqshadaha naqshadaha ee ku xeeran hubkan xoogga badan.
Haddii aad diyaar u tahay raadinta Tattoo qalab, waad ogaan doontaa taas, astaamaha faashka iyo sidoo kale astaamaha faasaska la tallaabay waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan. Taasina waa tan la siiyay doorashada, waxaa jira dad badan oo doorta inay ku dhejiyaan qalabkan maqaarkooda. Qaarkood waxay u sameeyaan sababtoo ah waxay leeyihiin macno gaar ah oo asalkooda hoose ama shaqada ay qabtaan awgood.
Gacantu waxay noqon kartaa meel ku habboon in lagu sawiro, in kasta oo ay wax waliba ku xirnaan doonaan sida muuqata ee aad doonayso inay u noqoto. Xitaa waxaa jira kuwa ku dhiiraday inay wejigooda u saaraan tattoo faasas, wacdaro!
1 Maxaa loo yaqaan 'tattoos'?
2 Gallery leh fikrado tattoo faas ah
Maxaa loo yaqaan 'tattoos'?
Tilmaamaha faashadda ayaa had iyo jeer lala xiriiriyay sifooyinka de itaal, hogaamin ama haybad. Ma ahayn ilaa ay reer Yurub la kulmeen dagaalyahannadii foosha xumaa ee woqooyiga, vikings, markay bilaabeen inay arkaan faasas lagu xardhay maqaarkooda iyo waliba waxyaabo kale oo dhaqankooda ka mid ah, kuwaas oo iyaga ka dhigay laga baqay cadaawayaashiisa oo dhan ilaa heer ay aaminaan inay ahaayeen cadaabta leh maqaarka dadka.
Waqti ka dib, Tattoo-yadaani waxay ku sii xoogaysanayeen dadka reer Yurub waxayna ku fidayeen xawaare sare tiro aan dhammaad lahayn macnaha. The badan waa kuwan aan horay u soo sheegnay: xoog, hoggaan ama gobnimo. Laakiin halkaas kuwa kale macnawiyaal aad ansax u ah noocan ah tattoos sida ay naqshadeynta, tusaale ahaan, laba faas waa astaan walaaltinimo dad ama dad.
Un macnaha xiisaha loo qabo nooca tattoos-ka ayaa ah beerahaMarkii xilligii abuurka la dhammeeyo, faaskii waa la aasay si loo gudbiyo xoog dhulka iyo sidoo kale dalagyo xoog badan oo faro badan. Gudaha qadiimiga ah Shiinaha faaska waxaa lagu xardhay dharka saraakiisha ugu dhow boqorka si uu u matalo maqaamkiisa bulsheed iyo kan ku dhowaanshaha awoodda.
Lasoco wixii kusoo kordha macnaha Tattoo tattoo, mid kale oo ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee la isticmaalay waa laba faasas oo isbarbar socda oo matalaya labada fikradood ee iska soo horjeeda ee tan loo adeegsaday. qalab; ah fikradda dhismaha iyo wax duminta, laba ficil oo gebi ahaanba iska soo horjeeda oo lagu fulin karo isla qalab.
Allabaryo, is dhiibid, go'aan uu kuwa kale of the macnaha baahsan oo loogu talagalay tattoos faas. Qofka haysta aaladdan awoodda badan ee la sawiray ayaa loo fahmay inuu yahay awood u leh wax kasta si aad u gaarto hadafyadaada ama aad u difaacdo taada xaalad kasta oo u baahan tan iyo cabsi ma yaqaan.
Naqshadaha naqshadaha faasku waxay ku biiraan caqiidada bacriminta iyo gelitaanka tan iyo markii faashka, oo leh afkiisa fiiqan, uu furmayo siyaabo cusub. Iyo markiisa, faas laba-gees leh wuxuu ku xiran yahay Hinduuga maxaa yeelay wuxuu astaan ​​u yahay Iftiinka samada; dhaqamada qaarkood xitaa faaska wuxuu la xiriiraa dibiga taas oo ka dhigaysa a suldaan xoog leh guud iyo xayawaan.
Naqshad aad u baahsan ayaa sidoo kale lagu sawirayaa faas yar oo ku jira faraha gacmaha, taas oo astaan ​​u ah sida baahiyaha aan nolosha ugu baahan nahay ay gacanta ugu jiraan.
On lid ku ah, kale dadka qaata tattoo faas waxay sameyn karaan sababta oo ah taariikhda ka dambeysa qalabkan iyo astaamaha ay tahay in qofka adeegsanayaa uu yeesho si ay u awoodaan "shaqeyn". Waana in faasasku yihiin aalado adag oo awood u yeeshay inay ka caawiyaan horumarka aadanaha iyo isbeddelka kumanaan sano. Oo intaas oo dhanna in kastoo ay xaqiiqdu tahay in hawlgalkeedu aad u fudud yahay.
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in faashku yahay a qalab joogo in ku dhow dhamaan dhaqamada aduunka Iyo, dabcan, mid kasta oo iyaga ka mid ahi wuxuu siiyay taabashadiisa shakhsi ahaaneed, taasoo naga dhigaysa inaan helno naqshado, sawirro ama matalaadyo asal ah oo kala duwan.
Laga soo bilaabo faasas baalal leh of the mareykanka u dhashay ilaa faasas nordic edebdarro, qalabkani wuxuu ka caawiyay dhammaan dadka meeraha inay horumariyaan, koraan oo horumariyaan ilbaxnimoyo awood leh kuwaas oo maanta aan markhaati ka nahay taariikhda, sawir gacmeedyada ama halyeeyada u gudbaya awoowayaasha iyo ayeeyada una taga caruurtooda.
Waa ku filan tahay inaad si adag u xajiso oo aad u dhaliso xoog iyo sidoo kale xawaare si madaxa cidhifkaagu u siiyo saamaynta. Dunida dhexdeeda oo lagu sawiro, waxaa jira kuwo badan naqshadaha naqshadaha faaska. Iyo, sidaan ku sheegay bilowga maqaalka, waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, inkasta oo aan u kala sooci karno laba nooc, kuwa faas fudud wata, iyo kuwa ay ku jiraan laba faasas oo is-dhaafsan.
In kasta oo, haddii aan dhex-galno faashadda faasaska macnaha, waxaan ku dari karnaa dhowr qaybood. Dhinac, macnihiisa dhaqan, ee la xidhiidha Vikings, dhinaca kale, shaqada adag (qoryaha dabka, dabka, kuwo kale) iyo sidoo kale argagax, lala xiriirinayo adduunka shineemo iyo sheekooyin kala duwan oo qalabkani leeyahay. ayaa ciyaaray door macabre ah.
Gallery leh fikrado tattoo faas ah
Iyo, sida had iyo jeer, gudaha sawireynta waxaan rabnaa inaan waxyar ku siino Raxmadda Naqshadeyntaada soo socota waana sababta aan kuugu dhaafeyno galleel yar oo wata astaamo faas ah oo aan helnay, waan kaa rajeyneynaa u adeegidah I caawi oo ay ku siiyaan fikradaha asalka ah si aad ugu sawirtid maqaarkaaga.
ka faashash faash Iyagu waa xulasho aad u xiiso badan oo ay ugu wacan tahay macnahooda xiisaha leh ee aan hore u sharraxnay. Hadaad raadinayso figrado kuu faaruqin faas, halkan waxaad ka heli doontaa iyaga. Waxaa jira nashqado loogu talagalay dhammaan dhadhanka iyo midabada. In ka badan ama ka yar caqli badan, fudud, faahfaahsan, midab iyo / ama madow iyo caddaan. Waxa kale oo jira tattoos faasas ah oo doonaya in ay si daacadnimo leh u matalaan faas caadi ah, halka kuwa kale ay leeyihiin jihayn dhow oo ay faasku u tahay hub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo faashka, ururinta naqshadaha iyo tusaalooyinka
Tattoos oo leh astaamaha Om, ruux ahaanta maqaarka